Fitsarana avo (HCJ): filoha teo aloha iray sy praiminisitra iray hanokafana fanadihadiana | NewsMada
Fitsarana avo (HCJ): filoha teo aloha iray sy praiminisitra iray hanokafana fanadihadiana
Par Taratra sur 22/11/2018
Ho tonga hatramin’ny farany ? Tafatsangana, afakomaly teny amin’ny Antenimieram-pirenena ny vaomiera handray ny fitoriana sy hanadihady ny momba ny filoha teo aloha iray sy ny praiminisitra iray. Voasolo tena ao anatin’izany vaomiera izany ny vondrona parlemantera miisa 11 eny Tsimbazaza. Mbola handalo dingana lavabe sy nohasarotina anefa izany vao mety ho tonga any amin’ny fitsarana ireo mpitondra ireo eo anivon’ny Fitsarana avo (HCJ), natao hitsara ireo mpitondra ambony.
Mila mahafeno depiote 102 sy 76…
Anisan’ny andraikitr’io vaomiera io ny fijerena ny famolavolana ny fiampangana. Entina eo anivon’ny fivoriambe izany na mitombina na tsia. “Eny amin’ny fampanoavana ny fitoriana ary mandinika izany na mitombina na tsia. Alefany eny amin’ny Antenimiera izany amin’ny alalan’ny filohan’io Andrimpanjakana io. Mandalo ny birao maharitra izany avy eo ary entina eo amin’ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina”, hoy ny depiote Rivotiana Jean Bosco. Ialohavan’ny fandinihan’io vaomiera natsangana io avokoa anefa izany. Mila mahafeno ny fetrisa, depiote 102 vao azo irosoana ny fitsarana ny filoha teo aloha iray raha mahafeno ny antsasa-manila, 76 kosa ireo depiote ahafahana mitsara ny praiminisitra na mpikamban’ny governemanta na mpitondra ambony hafa.
Iray amin’ireo filoha teo aloha…
Efa nanambara ny filoha voalohan’ny Fitsarana an-tampony eo anivon’ny HCJ, Andriamanankiandrianina Rajaona, ny volana oktobra teo fa misy raharaha maha voatonona olona ambony ao amin’izy ireo. “Fitoriana efatra izany ka ahitana filoham-pirenena teo aloha sy praiminisitra ary minisitra amin’ireo mpitondra ambony nisy nitory ireo”, hoy izy. Ankoatra izany, notorian’ny fikambanana iray koa ny lehiben’Andrimpanjakana am-perinasa tafiditra amin’ny resaka fifidianana. Manampy izany ny iray amin’ireo filoha teo aloha, anisan’ny hotsaraina koa raha ho tafita ihany izao dingana lavabe tsy maintsy lalovana raha hitsara mpitondra ambony izao. Tsiahivina fa fitoriana tamin’ny fotoana nanaovany ny asany amin’ny maha mpitondra ambony azy no hitsaran’ny HCJ azy ireo.